Mihitsoka sy mirehitra ny orinasa ‘Mario Kart’ mpanao cosplay taorian’ny nampakarany ny fanapahankevitry ny Nintendo · Global Voices teny Malagasy
Fifaninanana tsy ara-dalàna ampiasàn'ny 'Mario Kart' ireo endrik'olona Nintendo
Voadika ny 20 Febroary 2020 5:14 GMT
Mpanao YouTube iray maiakanjo toa an'i Mario an'ny Nintendo, mamily kart eny an-dalambe ao Tokyo. Pikantsary YouTube. Manamafy ilay mpikarakara fitsangantsanganana fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny Nintendo izany.
Ny 29 Janoary 2020 lasa teo, nolavin'ny Fahefana Avo Fizakàmanana ara-tSaina ao Japàna ny fampakarana ady (fandravàna didy) nataona mpikarakara fitsangatsanganana malaza tao Tokyo momba ny fitorian'ny Nintendo ny orinasany. Fa tsy izay no nataon'ny Fahefana Avo fa, nampitomboiny ho avobe ny onitra haloa amin'ilay goavan'ny lalao an-dahatsary sy ny fialamboly, raha 10,000,000 Japanese yen (100.000 dolara amerikàna) dia lasa 50,000,000 yen (500.000 dolara).
Ny MARI Mobility Development, izay fantatra ihany koa tamin'ny anarana hoe Maricar, dia mampanofa karts voizina tongotra any aminà toerana marobe ao Tokyo, Japana. Efa ela no namporisihina ireo mpandray anjara mba hanao ny fiakanjo natolotry ny Maricart ho toy ireo endrik'olona any anatin'ireo andiany Nintendo malaza ‘Mario Kart’, avy eo mba “hihazakazaka” eny amin'ny fifamoivoizana ao an-tanàndehibe ary manao andiana karts marobe. Afaka mitondra an'ireo karts voizina tongotra avokoa ireo olona rehetra manana fahazoandalana hamily ao Japàna na ny fahazoandalana iraisam-pirenena mikasika ny familiana.
Araka ny voalazan'ny BengoDotCom, tranonkala fampahalalam-baovao Japoney iray izay mitatitra momba ireo olana ara-pitsaràna, mialohan'ny fitorian'ny Nintendo, nanambara ny tranonkala an'ny Maricar hoe:
Raha miakanjo toa an'i Super Mario ianareo, dia sahala amin'ny tena mitondra Mario Kart [avy ao amin'ilay lalao an-dahatsary]!
Nitatitra ihany koa ny BengoDotCom fa nampiasaina'ny Maricar ireo pitsopitsony, ireo sarivongana sy ireo vokatry ny Nintendo ofisialy momba ny tarakevitra Mario mba handravahana sy hivarotana ireo toerana isankarazany fanaovany fitsangantsanganana manodidina an'i Tokyo.
Na dia manamafy aza ny Maricar fa tsy misy hifandraisany mihitsy na fifanohizana amin'ny Nintendo – ny “Kart An-dalambe dia tsy nalaina avy amin'ny Nintendo velively, [na] ny lalao “Mari Kart”, hoy ny vakin'ny fampitandremana an-tsoratra iray teo amin'ny Tranonkala iray tsy mandoa hetra – tamin'ny Septambra 2018, nanapa-kevitra ny mpamorona ny lahatsary “Mario Kart” miorina ao Kyoto fa hanenjika ara-pitsaràna ny Maricar. Nampahafantatra ny Nintendo fa araka ny Lalàna ao Japàna mifehy ny Fifaninanana tsy ara-dalàna, tamin'ny alalan'ny fampiasana tsy nahazoana alàlana ireo endrik'olona ao anatin'ny “Mari Kart” tany anatina fitaovana entina mivarotra, dia niditra tamina “fifaninanana tsy ara-dalàna” ny Maricar (“不正競争行為にあたる“).
Nitovy hevitra tamin'ny Nintendo ny fitsaràna iray ao Tokyo, nanome onitra 10 000 000 yens japoney ho an'ilay mpanamboatra lalao an-dahatsary, tsy maintsy ho aloan'ny Maricar tamin'io taona io ihany. Nanaovan'ny Maricar fampakarana ady tany amin'ny Fitsaràna Avoao Japana ho fandravana ny fanapahankevitry ny Tribonaly tao Tokyo, fitsaràna izay nandà ilay fampakàrana ary namoaka didy vonjimaika tamin'ny volana May 2019, nanambara fa “manozongozona ny tombontsoa ara-barotry ny Nintendo ireo asa nataon'ny Maricar” (“MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する”).
Ny Janoary 2020, nampitomboin'ny Fitsaràna Avo misahana ny Fizakamànana ara-tSaina ho 50 000 000 yens ny onitra ho an'ny Nintendo :
That's a lot by Japanese standards.
Nintendo has been serial-winning cases in recent weeks in Japan and the US.
(There is a reason why in a company portrait a while ago, the Nikkei called Nintendo's department “legendary”.) https://t.co/qpfE6xyVNG
— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) January 29, 2020
Tena betsaka loatra ireo araka ny fenitra japoney:
Tato anatin'ny herinandro maromaro, nandresy hatrany tanaty andiany maromaro tao Japana sy Etazonia ny Nintendo.
(Izay no antony, tao anatina endrika orinasa iray nandritra ny fepotoana vitsy lasa izao, niantsoan'ny Nikkei ny departemanta an'ny Nintendo ho “malaza”) https://t.co/qpfE6xyVNG
— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 29 Janoary 2020
Malaza amin'ny ny Nintendo. Fotoana mitovitovy amin'izay ihany no nandreseny tamin'ny fampakarana ady nataon'ny Maricar, nandresy ihany koa izy teo amin'ny fitsaràna misahana ny fazakàmanana ara-tSaina tao Etazonia, tamin’ilay adiny naharitra ela ho fandraràna ny fampiantranoana anaty tambajotra an'ireo karazana kilalaony nalaza sangy efa ntaolo be. Tao Eoropa, tamin'ny Janoary 2020 ihany koa, nandresy ara-pitsaràna ihany koa ny Nintendo tamin'ny fanakanana an'ireo mpanjifa sasantsasany tsy hanafoana an'ireo famandrihana mialoha.
Raha ny mahakasika an'i Maricar indray, koa satria mihevitra ny hanokatra kianja iray ao Osaka manaraka tarakevitra ny Nintendo amin'ity taona ity ihany, izay ahitana an'ireo endrik'olona avy amin'ny “Mario Kart”, ny fisiana orinasa mpikarakara fitsangantsanganana iray mampiasa kart ao Tokyo sady mampiasa ny marika Nintendo – na dia amin'ny fomba ivelan'ny rafitra aza – dia tena hitondra fifanjevoana amin'ireo mpitsidika. Fanampin'izay, niteraka loza marobe ireo kart Maricar voizina tongotra, ary amin'ny ankapobeny dia tsy tian'ireo mponina ao Tokyo ny mahita azy ireny eny an-dalambe ao an-tanàna, naneho loza miharihary ho an'ny marika Nintendo ilay fanamiana.
Taorian'ny fahitàna an'ireo kart mikarenjy eny an-dalambe, tezitra tamin'ny Nintendo ihany koa ireo mponina, nandefa imailaka sy fitarainana maro [ho any amin'ilay orinasa mpanamboatra lalao an-dahatsary].
Na dia mbola mandroso hevitra amin'ny fanaovana fivezivezena amin'ny kart ao Tokyo aza ny Maricar, nanomboka hatramin'ilay didy vonjimaika ny volana May 2019, nofoanan'ilay orinasa ny tranonkalany Web voalohany ary nofoanany koa ireo akanjo sy ny marika nifandraika tamin'ny Nintendo tany amin'ireo toerana maro samihafa. Na izany aza, mitohy ihany any ao anatin’ireo lahatsary marobe YouTube ireo andron'i Mario sy ireo endrika hafan'ny mpilalaon'ny Nintendo mamily kart eny an-dalambe tao an-tanànan'i Tokyo.